ဓမ္မဂင်္ဂါ: အောင်ဆန်းစုကြည်(သို့မဟုတ်) ဗုဒ္ဓဘာသာသူရဲကောင်း
အရှေ့တောင် အာရှထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံများတွင် အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဘာသာရေးနှင့် နိုင်ငံရေးတန်ဖိုးကြားဝယ် ဆုံမှတ်တစ်ခုအဖြစ် တိုက်ပွဲဝင်နေသည့်ပြယုဂ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၁၉၄၅ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ့အမျိုးသား သူရဲကောင်းဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ သမီးအဖြစ် အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးဖွားခဲ့သည်၊ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းသည် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလတွင် မြန်မာလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုကြီး၏ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ဗြိတိသျှနှင့် ဖက်ဆစ်ဂျပန်အုပ်စိုးမှုမှ မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရတော့မည် အချိန်နီးကပ်လာချိန်တွင် လုပ်ကြံခံခဲ့ ရသူဖြစ်သည်။
အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ရန်ကုန်၊ဒေလီနှင့် အောက်စဖို့ဒ်တို့တွင် ပညာသင်ယူခဲ့ပြီး အောက်စဖို့ဒ်တွင် မိသားစုဘ၀ကို ထူထောင်ရန် အခြေချခဲ့သည်။ အင်္ဂလိပ်အမျိုးသားတစ်ဦးနှင့် အိမ်ထောင်ပြုခဲ့ပြီး သားနှစ်ဦးထွန်းကားခဲ့သည်။ မြန်မာနှင့် အရှေ့တောင်အာရှအရေးများနှင့် ခပ်ဝေးဝေးအင်္ဂလန်နိုင်ငံတွင် ပညာရှင်တစ်ဦးအဖြစ် အေးချမ်းစွာ နေထိုင်ခဲ့စဉ် သူမ၏ မိခင်နာမကျန်းဖြစ်၍ မိခင်ကြီးအား ပြုစုရန် ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်သွားခဲ့သည်။ ထိုအချိန်အတောအတွင်း အစိုးရက ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးမည် ဟု ကြေငြာခဲ့ရာ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုသူရဲကောင်းကြီး၏ သမီးအနေဖြင့် သဘာဝအားဖြင့်ပင် ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုရေစီးထဲ ပါခဲ့ရတော့သည်။ နောက်ဆုံးတော့ သူမသည် ထိုဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကြီး၏ သင်္ကေတဖြစ်ခဲ့လေတော့သည်။
နေအိမ်အထိန်းသိမ်းခံဘ၀ရောက်နေသည့်ကြားမှပင် သူမ၏ လှုပ်ရှားမှုက ၁၉၉၀ ခုနှစ်မေလတွင် ကျင်းပသည့် ရွေးကောက်ပွဲကို ကြီးကျယ်စွာ အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ သို့သော် တပ်မတော်အစိုးရက ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်ကို အသိအမှတ်မပြုခဲ့ပဲ ခေါင်းဆောင်များကို အကျဉ်းချပါလေသည်။ အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမူ ၁၉၉၀ ခုနှစ်ကတည်းက နေအိမ်တွင် ထိန်းသိမ်းအကျဉ်ချထားခဲ့သည်။ မည်သို့ဖြစ်စေ သူမကတော့ ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် ဆက်လက်ပြောဆိုခဲ့သည်သာဖြစ်သည်။
၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် သူမ၏ ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် အလံမလဲ တိုက်ပွဲဝင်မှု၊ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် အမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေး အားထုတ်မှုများအတွက် နိုဘယ်ဆုရွေးချယ်ရေးကော်မတီက သူမအား ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်လ်ဆု ချီးမြှင့်ခဲ့ကြသည်။
အော်ဆန်းစုကြည်၏ နိုင်ငံရေးဒဿနမှာ အလွန်ရိုးစင်းသည်ဟု ထင်ရသော်လည်း ဗုဒ္ဓဒေသနာတော်၌ ကဲ့သို့ သူမ၏ စကားများတွင် စွမ်းအင်နှင့် စကားလုံးအရည်အသွေးများပါဝင်နေသည်။ ရိုးစင်း၍ အားအင်ပါသော စကားလုံးများဖြစ်သည်။ သူမ၏ အကျော်ကြားဆုံးစကားတစ်ခွန်းမှာ ကြောက်ရွံ့ခြင်းမှ ကင်းဝေးရေး ဖြစ်သည်။
မိန့်ခွန်းပြီးခါနီးတွင် သူမက ဒီခေါင်းစီးစကားလုံးကိုပင် တဒင်္ဂခဏဖော်ထုတ်ပြီးနောက် မဟတ္တဂန္ဓီကြီး၏ “ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက် ဖြစ်စေ နိုင်ငံတစ်ခုအတွက် ဖြစ်စေ အကြီးကျယ်ဆုံးလက်ဆောင်မှာ ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိမှု၊ စိတ်ထဲမှာ ကြောက်ရွံ့ခြင်း ကင်းမှုပင် ဖြစ်ပါ၏ ” ဟူသော သြ၀ါဒစကာကိုးကားသည်။ မဟတ္တမဂန္ဓီကြီးက ဤကြောက်ရွံ့ခြင်းကင်းရေးသြ၀ါဒကို ပေးသည့်အခါ သူက သူကျွမ်းကျင်းကျင်သည့် တစ်စုံတစ်ခုကို ပြုလုပ်တတ်သည်။ ထိုအရာမှာ ဗုဒ္ဓအရှင်၏ ရှေးဟောင်းကျင့်စဉ်ဖြစ်ကြောင်း ဖွင့်ဆိုခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။
အောင်ဆန်းစုကြည်က “ကြောက်ရွံ့မှုကင်းခြင်းသည် မဟတ္တမဂန္ဓီမိန့်ဆိုသကဲ့သို့ပင် လက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ် ကောင်းဖြစ်နိုင်သော်လည်း ပို၍ တန်းဖိုးကြီးမားသောအရာမှာ သင်တို့ကိုယ်တိုင်၏ အားထုတ်မှု၊ ကြိုးပမ်းမှုအားဖြင့် ရရှိလာသည့် သတ္တိပင်ဖြစ်သည်။ ထိုသတ္တိက သင်တို့၏ အပြုအမူများကို ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်နေသည့် ကြောက်ရွံ့မှုကို ဖယ်ရှားနိုင်သော အလေ့အကျင့်ကို ထူထောင်ပေးပါလိမ့်မည်” ဟု ဟောပြောလေသည်။
ဤစကားလုံးများကို ဖတ်ရှုကြရသည့်အခါ အောင်ဆန်းစုကြည်၏ လုပ်ရပ်က သတ္တိ၊ သည်းခံမှု၊ စိတ်ရှည်မှု၊ အကြမ်းမဖက်မှုကဲ့သို့သော ဗုဒ္ဓတရားတော်လာအခြေခံတန်းဖိုးများနှင့် ခေတ်သစ်ဒီမိုကရေစီတန်ဖိုးများကို တွဲဖက်ကျင့်သုံးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ထင်သာမြင်သာ ရှိလှပါပေသည်။
ဤသို့တွဲဖက်ကျင့်သုံးပြလိုက်ခြင်းဖြင့် ဗုဒ္ဓတရားတော်တန်ဖိုးဟူသည် ဘုရားကျောင်းနှင့်သာ ဆိုင်သည်ဟူသော အမြင်ရှိသူများကိုပင် အာရုံစူးစိုက်လာစေနိုင်သည်အထိ အင်အားကြီးကြီးမားလှပေသည်။ ဗုဒ္ဓအရှင်၏ တရားတော်တန်ဖိုးများက အသောကခေတ်မှသည် ယနေ့ခေတ်တိုင်အောင် နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွင်သာမက ဘာသာရေးရိုးရာ လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်လည်း အဓိကကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့လေသည်။
Aung San Suu Kyi: A Buddhist Hero ကို ဆီလျော်အောင် ပြန်ဆိုပါသည်။
Posted by ဓမ္မဂင်္ဂါ at 5:02 AM
ဘာသာရေး အနေနဲ့ ပြ တာဆိုရင် . (ဗိုလ်ချုပ်သမီးဟာ ဗိုလ်ချုပ်လိုပဲ ရဲ့ရင့်သူဖြစ်လာမယ်ဆိုရင် . ကျွှန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ ဘုရားရှင် ပွင့်မလာဘူး . ဘုရား ရှင်သည် ဘုရင့်သား ဖြစ်သော်လဲ အတု မရှိ လူသား ဖြစ်လာခဲ့သည်) ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသမီးဖြစ်တိုင်း . ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလို လုပ်မည် မထင်ပါ . သို့အတွက်လဲ . နိုင်ငံခြားသားနှင့်လက်ထပ်ခြင်းဖြစ်သည် .(အင်္ဂလိပ်လူမျိုး) သည် မြန်မာကိုအုပ်စိုးခဲ့သောလူမျိုး .မြန်မာနိုင်ငံကိုသွေးစုပ်ခြယ်လှယ်သည့်လူမျိုးကိုမှ ဘာကြောင့်လက်ထပ်သနည်း(သူမ မသိလေသရော) . သူမ ၏ အဘိုး ဗိုလ်မင်းရောင် ကော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပါ အမျိုးကိုချစ်ပါသည် .
သူမကိုယ်တိုင်လဲ သိပါလိမ့်မည် အမျိုးသမီးတယောက် ထက် ယောက်ျားလေး များသည် ပိုပြီးစွမ်းဆောင်နိုင်ပါသည် . ထို့အတွက်လဲ ဘုရားရှင်သာသနာတွင် ရဟန်း များသာ၇ှိပါတော့သည် . ရဟန်းအမ များမရှိတော့ပါ .
ထိုသို့ နှိုင်းယှဉ်ပါက . ထိုအမျိုးသမီးကို အားကိုးယုံကြည်သောသူများ သည် . ဘယ်လို ဥာဏ်အရည်အသွေး (သူတပါးအားကိုးချင်စိတ် များစွားရှိနေသည်ကို သိနိုင်ပါ၏) .
ဦးဂင်္ဂါရေ...အလည်ရောက်ပါတယ်။ ခရီးသွားရင်းဆိုတော့ အွန်လိုင်းက ဖုန်းနဲ့သုံးနေရတာ များတယ်။ လတ်တလော ပို့စ်များအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဪ...ဗုဒ္ဓဘာသာ သူရဲကောင်းဆိုတာ အဲ့ဒါကိုခေါ်တာလား... သာသနာ ထွန်းကား ပြန့်ပွားအောင် လုပ်နေတဲ့ ရဟန်းရှင်လူတွေကို ပြောတာ မဟုတ်ဘူးလား... ဗုဒ္ဓဘာသာ သူရဲကောင်းတဲ့ သူ့မျိုးဆက်တွေကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာ မဟုတ်ဘူးနော်....မှတ်သားလောက်ပါပေတယ် ...
လူတယောက်၏ အရည်အချင်းနှင့် လုပ်ရပ်ကို မကြည့်ပဲ၊ လူမျိုးခွဲခြားခြင်း၊ ကျားမ ခွဲခြားခြင်းများ သည် အမတန် အဆင့်အတန်း နိမ့်သော အတွေးအခေါ်ဖြစ်သည်။ စစ်အစိုးရလက်ထက်က brain wash လုပ်ခြင်းခံထားရမှုများကို ဥာဏ်ရှိရှိ တွေးခေါ် စဉ်းစားပြီး ကုသပါလေ။ လူရာမ၀င်သော အတွေးအခေါ်များနှင့် လူကြားထဲ စကားပြောလျှင် အရှက်ကွဲပါလိမ့်မည်။